Who Are You To Complain? – Hsu Myat Moe
ဒီရက်ပိုင်းမှာ Trans Siberian အပိုင်း ၈ ပိုစ့်မတက်နိုင်တဲ့အပြင် ပိုကြာဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ် ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ၂ လ ကျော်ကြာ pending ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ EP က ရုတ်တရုတ် Approve ဖြစ်ပြီး …. အလုပ်သွားနေရလို့ပါပဲ ။ ဒါ့အပြင် အလုပ်နဲ့ အိမ်နဲ့ ကတော်တော်ကိုဝေးတာ..၉ နာရီ အလုပ်ကိုရောက်ဖို့ မနက် ရ နာရီကနေ အိမ်က ထွက်ရတယ် ။ တစ်နေ့ကို အသွား ၂ နာရီ အပြန် ၂ နာရီကြာပါတယ် ။ ရထား ၂၂ မှတ်တိုင်စီးရပြီး ကားနာရီဝက်ထပ်စီးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအိမ်နဲ့က စာချုပ်ရှိသေးတော့ စာချုပ်ပြည့်မှပဲပြောင်းရမှာပါ ။ အချိန်တွေကုန်တယ် လူပင်ပန်းပေမယ့်…complain တက်ရအောင် Who are you to complain ဆိုပြီးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ထားတယ် ။ ဘ၀ပင်လယ်မှာ တွေ့တဲ့ အကွေ့တိုင်းကို သင့်တော်တဲ့ တက်နဲ့လှော်ရမှာမလား ။ ညည်းနေလို့ မထူးဘူး…စာချုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှပဲ နီးနီးနားနားကိုပြောင်းတော့မယ်။
အလုပ်သစ်လေးတော့ သဘောကျသား ၊ လစာလေးကလည်းမဆိုးဘူး ၊ နောက်ပြီး ကိုယ်တာဝန်ယူလုပ်ရမယ့် အပိုင်းကို ကိုယ်ပိုင် decision နဲ့ စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့်ရှိတယ် ။ သုံးမယ့် နည်းပညာက အသစ်ဆိုတော့ comfort zone ထဲမှာပဲမနေဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကွက်တိ ။ ဒီတော့ Trans Siberian ခရီးစဉ်တွေက လာမယ် ကြာမယ်ပေါ့နော် ။ စာကိုလည်း တစ်ပတ်တစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ Trans Siberian အကြောင်းတွေလည်း လာဦးမှာမို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးလို့…။
မစန်းထွန်းက စာအုပ်တွေအကြောင်းရေးတော့ ကိုယ့်မှာ အားကျလိုက်တာ ။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ စာဖတ်ဝါသနာပါ ပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဆို ဘယ်လိုမှမဖတ်ချင်ဘူး ၊ အရသာလည်းမတွေ့ဘူး ၊ အင်္ဂလိပ်စာဆို ကျောင်းစာတွေ ၊ ပေပါတွေ ၊ ဘလော့တွေလောက်ပဲဖတ်ဖြစ်တာ ။ ကြိုးစားဖတ်ပေမယ့် ဘယ်လိုမှ စိတ်မပါတော့ ဘယ်တော့မှ ပြီးအောင်မဖတ်ဖြစ်ဘူး ။ ခုတော့ အလုပ်သွားရတဲ့ လမ်းမှာ ဖေ့ဘုတ်သုံးမယ့် အစား စာဖတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်မလားလို့ စဉ်းစားမိနေတယ် ။ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ ဖတ်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးတွေရှိရင်လည်း ညွှန်ပေးကြပါဦးလို့ ။
တကယ်တော့ စာရေးကောင်းဖို့ဆိုရင် စာဖတ်အားကောင်းဖို့လိုပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်လိုများများရေးနိုင်ဖို့ grammar သိရုံ vocabulary သိရုံလောက်နဲ့ စာကောင်းကောင်းမရေးနိုင်ပါဘူး ။ ဒီအတိုင်း ၀ါကျမှန်အောင်ရေးလို့ရပေမယ့် လိုရင်းကို ထိထိမိမိ ရေးတတ်ဖို့ဆိုရင် စာဖတ်များမှ ပိုရေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ် ။ ဒါတော့ ကိုယ့်အမြင်ပေါ့နော် ။ အဂ်လိပ် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စတွေတက်လာတိုင်း comment တွေ အမြဲလိုလိုရေးဖြစ်ပါတယ် ။ အဂ်လိပ်လို အထိုက်အလျောက်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပေမယ့် ရေးတဲ့အခါ စာချောအောင်ရေးနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ရေးတဲ့ဟာတွေက native တွေလို ထိထိမိမိ မရှိဘူးလို့ အမြဲလိုလိုခံစားရတယ် ။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုရေးနိုင်ပြောနိုင်တယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ လုံးဝ အားမရ..။ အင်္ဂလိပ်လို စာရေးရင် လိုတိုရှင်း ထိထိမိမိရေးတတ်ဖို့ စာများများဖတ်ရမယ်ဆိုတာကို သိပေမယ့် အင်္ဂလိပ် စာအုပ်ကိုအရသာက မတွေ့..။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အရာမဆို တဖြေးဖြေး ကြိုးစားလုပ်ယူရင် ရတာမို့ ကြိုးစားပြီးဖတ်ကြည့်မယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ် ။ နောက်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်လည်း အင်္ဂလိပ် subtitle မပါဘဲကြည့်ဖို့အကျင့်လုပ်ရဦးမယ် ။ ဘယ်အရာမဆို ကြိုးစားလုပ်ယူရင် ရတာမို့ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မလုပ်ဖူးတာတွေလုပ်မယ် ၊ မသွားဖူးတဲ့နေရာတွေကိုသွားမယ် ၊ မစားဖူးတာတွေကိုစားပြီး အရာရာတိုင်းကို curious ဖြစ်အောင်နေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပြောချင်တာတွေ ပြောပြချင်တာတွေတော့ အများကြီးပဲ ။ နောက်များမှ ကြုံသလို ပြောပြပါဦးမယ်..။ အားလုံးလည်း စိတ်လက်ချမ်းသာသော နေ့ရက်လေးတွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ ။